Aya ndiwo mashandiro anoita Intercom nePambaPods | IPhone nhau
Iyo Intercom ficha ndeimwe yezvinhu zvitsva pane iyo HomePod, uye Isu tinotsanangura mashandisiro ayo uye mashandisiro kubva kune yedu HomePod, iPhone neApple Tarisa kuti ukwanise kutumira mameseji ezwi nekukurumidza mukati memba yedu.
3 Uchishandisa Intercom
Kuti ushandise iyi nyowani mashandiro, zvinodikanwa kuve neinenge imwe HomePod pamba. Haisi yakasarudzika basa remutauri weApple, asi pasina iyo haigone kumisikidzwa. Chii chimwe zvishandiso zvako zvinoda kuvandudzwa kune yazvino iOS kuvengwa kunowanikwa (iOS 14.2 kushoma). Kana zvese zvinhu zvagadziriswa, unogona kuzvishandisa pane yako iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod Mini uye kunyangwe mumotokari kuburikidza neCarPlay.
Iko kumisikidza kunoitwa kubva kuKushandisa Kumba, kupinda muzvirongwa zvako zvekumba uye kuwana iyo Intercom basa. Ikoko isu tinogona kusarudza kana tichida kugamuchira meseji dzinotumirwa (kwete, chete kana tiri kumba kana nguva dzose), ndiani anogona kutitumira mameseji uye ndeapi maPodPod anoshandiswa nebasa iri, kuitira kana paine chero izvo zvatinoda kusiya (iyo iri yekurara, semuenzaniso). Iko hakuna zvakawanda zvingasarudzwa uye zviri nyore, saka kumisikidza kuri nyore.
Muvhidhiyo iwe unogona kuona mhenyu mashandiro anoita iyo Intercom, pakati pePambaPods, neiyo iPhone uye neApple Watch. Zviri nyore kwazvo kutumira mameseji pamwe nekuapindura, isu tinongofanirwa kufunga kana tichida kuti meseji iyi ive yemunhu wese kana chete yekamuri chaiyo, yatinofanira kuiratidza. Kana isu tikatumira meseji kukamuri uye isu tikapindurwa, mhinduro inoenda chete kuimba yekutangira, dai yaive meseji yemunhu wese, mhinduro ichave yemunhu wese. Tinogona sei kutumira iwo meseji? Iko hakuna kutaura kumwe chete, tinogona kushandisa akati wandei, semuenzaniso uyu:
Bvunza mune tenzi yekurara rini rakagadzirira?
Iti mukitchen, chikafu chiri kufamba sei?
Intercom Kukwesha mazino nekurara
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Aya ndiwo mashandiro anoita Intercom nemaPodPods